Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah ku fulisay 4 qof oo loo haystay qaraxyo ka dhacay Baydhabo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah ku fulisay 4 qof...
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah ku fulisay 4 qof oo loo haystay qaraxyo ka dhacay Baydhabo
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta oo isniin ah xukun dil ah ku fulisay 4 nin oo lagu eedeeyay inay ka tir yahan yihiin Al-Shabaab kuwaasi oo ka lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen Qaraxyo ka dhacay Maqaayado ku yaalla Baydhabo ee xarunta gobalka Baay.
Xeerilaainta Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ay sheegen raggaan ayaa waxaa ay soo abaabuleen Qaraxyo ay ku dhinteen dad badan ,islamarkaana ay ka tirsanayeen Al-Shabaab.
Wariye Maxamed Cabdirahman Cabdulle oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala magalada Baydhabo islamarkaana Ku sugnaa goobta xukunka uu ka dhacay ayaa Xaqiiqa Times u sheegay in xiliga xukunka uu dhacayay ay goob joog ka ahaayeen mas’uuliyiinta maxkamadda ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa inta badan fulisa xukuno noocan oo kale ah oo lagu filo dad ka tirsan Alshabaab, ayadoo mararka qaarna xukuno dil ah Ku fulisa rag ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan askarta gaysata dilalka Bareerka ah.
Hay’adaha u dooda xuquuqda Aadanaha ayaa horey Waxa dowladda Soomaaliya ay ka codsadeen in la joojiyo xukunada dilka ah ee ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Previous articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo booqashadiisii ugu horaysay dalka gudihiisa ku tagay Baydhabo: Daawo sawirada
Next articleNatiijada wareega koowaad ee doorashada Faransiiska oo lagu dhawaaqay